Amagwebu - Henan Coal Research Keming Mechanical Co., Ltd.
Amagwebu eziphathekayo, okwabizwa ngokuba aircrete, ikhonkrithi foamed, foamcrete, ikhonkrithi zeselula ayisindi okanye ukuncipha eziphathekayo uxinano, ichazwa njenge oluludaka esekelwe isamente, ubuncinane nge-20% (umthamo ngamnye) amagwebu entrained zibe nodaka zeplastiki.  igama eliyilo Njengoko uninzi akukho aggregate yomgrayo isetyenziselwa ukuvelisa ugwebu ikhonkrithi iya kubizwa ngokuba nodaka endaweni eziphathekayo; kusathiwa "isamente foamed" ngokunjalo. Ukuxinana ugwebu eziphathekayo kudla iyahluka ukusuka 400 kg / m³ ku-1600 kg / m³. Ukuxinana iqhele kulawulwa ngokuthi kufakwe ngokupheleleyo okanye inxalenye aggregate entle amagwebu.
ikhonkrithi Foamed uqobo iquka oluludaka zesamente kunye nothuthu okanye ngesanti namanzi, nangona abanye abathengisi bacebisa isamente ecocekileyo kunye namanzi kunye arhente amagwebu ngenxa nemixube okulula kakhulu. Le oluludaka ixubene phambili kunye ugwebu ovundileyo esiyenziwe nesityalo eziphathekayo ukuxuba. Le amagwebu wadala ngokusebenzisa i-arhente ugwebu, ezixutywe namanzi kunye nomoya ukusuka wenkunkuma. I-arhente amagwebu ezisetyenziswayo kufuneka babe nakho ukukhupha amaqamza emoyeni kwinqanaba eliphezulu lozinzo, nemithi iinkqubo emzimbeni imichiza wokuxuba, ubeka lukhuni.
umxube ikhonkrithi Foamed ukuze kuphalala okanye ngomtshini zibe ngumngundo, okanye ngqo isakhiwo. Le amagwebu yenza oluludaka izokwazi ukuhamba lula ngenxa yokuziphatha thixotropic lwe amadlu amagwebu, sivumele ukuba kube lula agalelwa ifomu ekhethiweyo okanye izinto viscous mould.The ufuna ukuya kwiiyure ezingama-24 ukuya ziyahlala (okanye iiyure nje ezimbini ukuba umphunga zinokunyangeka amaqondo ukuya ku-70 ° C ukukhawulezisa inkqubo.), ngokuxhomekeke variables kuquka lobushushu kokugquma nokufuma. Xa eqina, imveliso kwakhiwa ukuze kukhululwa walo.
Ikhonkrithi Foamed ingaveliselwa ezinoxinwano olulophu 400 ukuya 1600 kg / m³, kunye aqine imini-7 ka-1 ukuya kwi-10 N / mm² ngokulandelelanayo. Amagwebu ikhonkrithi na umlilo ukumelana, kunye neempawu zayo thermal kwaye acoustical yokugquma kwenza kube abalungele ngakubhalileyo ngokoluhlu olubanzi lweenjongo, ukusuka zokwambathisa imigangatho kunye nophahla, ukuba ize ukugcwaliswa. Kwakhona oluluncedo ngokukodwa nomana ukhangelwa nomsele abuyiswe.
A ambalwa izicelo ugwebu eziphathekayo zezi:
precast izinto eludongeni / panels
baphose-in-situ / uphose-in-ndawo ezindongeni
zokwambathisa imbuyekezo ngokubekwa
emgangathweni yokwambathisa screeds
screeds yokugquma uphahla
nechibi isahlulo ezizalisa
ekuvalweni iibhloko ezibuhlazarha
ukwahlukanisa iibhodi olwalusele
Amagwebu eziphathekayo kuyinto material zokwakha ubhetyebhetye kunye indlela elula yokuvelisa ayibizi kuthelekiswa esisodwa eziphathekayo ovundileyo. Amagwebu iikhompawundi eziphathekayo kusetyenziswa iimpukane ash kwingxubevange oluludaka ayibizi cwaka, kwaye nefuthe kangako kokusingqongileyo. Amagwebu ikhonkrithi evela ezahlukeneyo loxinano ukususela 200 kg / m³ ku-1600 kg / m³ kuxhomekeka kwisicelo. iimveliso konga elula ukuze kunqunyulwa ibe nobukhulu obahlukeneyo. Nangona imveliso kugqalwa uhlobo ngekhonkrithi (kunye amaqamza ngokubuyisela i aggregate), iimpawu zayo eziphakamileyo thermal kunye acoustical zokwambathisa ukwenza isicelo eyahlukileyo kakhulu kunokuba eziphathekayo oluqhelekileyo.
izinto zakutshanje kunye nophuhliso
De leminyaka eyadlulayo, alephuze amagwebu eziphathekayo kuye kuthathwa buthathaka kwaye non-elide ezineempawu shrinkage eliphezulu. Oku kungenxa amaqamza amagwebu ezingazinzanga kubangele njengogwebu eziphathekayo ukuba iipropati angakulungeli ukuvelisa ingxinano ephantsi kakhulu (engaphantsi kwama-300 kg / m³ loxinano owomileyo) kwakunye umthwalo ethwele izicelo zezakhiwo. Kungoko ke kubalulekile ukuba kuqinisekiswe ukuba umoya entrained kule ikhonkrithi foamed uqulathwe azinzile ngexesha elifanayo amaqamza ezincinane kakhulu zeenkqubo zawo zisele kunye ekwanti, yaye musa oko kwandisa permeability le intlama zesamente phakathi imigodi.
Uphuhliso arhente sewayini esekelwe zokwenziwa-enzyme, uzinzo isiponji kuphuculwe admixtures amagwebu esivelisa ezizodwa, ukuxuba zokumpompa izixhobo luphucule uzinzo isiponji kungoko amagwebu eziphathekayo, eyenza kube lula ukuvelisa njengokukhanya 75 kg / m³ density.The enzyme iqulathe iiprotheni esebenzayo kakhulu imvelaphi-biotechnology kwaye isekelwe phezu kwiproteni akuthandeki hydrolysis.In kwiminyaka yakutshanje ikhonkrithi foamed liye lasetyenziswa kakhulu emendweni, izakhiwo zorhwebo, izakhiwo kwimo yesiqhelo intlekele, izikolo, amagumbi kunye nophuhliso lwezindlu kumazwe afana eJamani, USA, Brazil, Singapore, India, Malaysia, Kuwait, Nigeria, Botswana, Mexico, Indonesia, Libya, Saudi Arabia, Algeria, Iraq neYiputa.